नेकपा सचिवालय बैठक सकियो, के के गर्‍यो निर्णय ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २२:५४ English
नेकपा सचिवालय बैठक सकियो, के के गर्‍यो निर्णय ?
काठमाडौँ, २९ असोज । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठक सकिएको छ । नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने, मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रक्रिया र उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको बैठक सकिएको हो ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकले पार्टीको संगठन विभागमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई सदस्यका रुपमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संगठन विभागको प्रमुखमा वामदेव गौतम र उपप्रमुखमा जनार्दन शर्मा मात्र थिए । तीन सदस्य थपिएसँगै नेकपाको संगठन विभाग ५ सदस्यीय बनेको छ । यो विभागले अझै पूर्णता भने पाएको छैन ।
बैठकले आगामी मंसिर १४ मा हुने प्रनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक १० गतेभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी पठाउन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका विषयमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रस्तरको कमिटी र जिल्ला कमिटीसँग छलफल गरी ३ जनाको नाम कात्तिक १० गतेभित्र पठाउन प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिइएको नेकपाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयर तथा गाउँपालिकाहरूको अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको उम्मेदवार भने सम्बन्धित गाउँ वा नगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ ।
मन्त्री हेरफेर र नयाँ सभामुखमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको भनिएपनि निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२९ आश्विन २०७६, बुधबार ११:०५ मा प्रकाशित